Uphumela obala ngekusasa uShabba - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uphumela obala ngekusasa uShabba
Uphumela obala ngekusasa uShabba
I-corona iphazamise izinhlelo zakhe zokubuyela ebholeni
USIPHIWE Tshabalala uthi usazobonakala ebholeni njengoba engakawabeki amakhokho ethala.
UMDLALI ozakhele udumo egijima kwiKaizer Chiefs ukhala ngokuphazamiseka kwezinhlelo zakhe ngenxa ye-coronavirus.
USiphiwe “Shabba” Tshabalala (35) ugcine ukubonakala ebholeni egijima kwiBB Erzurumspor yaseTurkey ngesizini eyedlule.
Ubuye kuleli ekuqaleni kwale sizini emuva kokuba ikilabhu yakhe igengcwe yizembe.
Selokhu ebuyile ubengakaze adlale ndawo.
UTshabalala ekhuluma naleli phephandaba izolo ngoLwesithathu emini ubalise nge-coronavirus njengoba ethi ilimaze izinhlelo zakhe eziningi ikakhulukazi ezokubuyela ebholeni.
“Le corona ihlukumeze wonke umuntu emhlabeni nami ngishayekile njengawo wonke umuntu.
“Amabhizinisi ami wonke avaliwe akwenzeki lutho ngawo.
“Imali ibalulekile futhi iyayishintsha impilo yomuntu.
“Kodwa-ke ibhola ngiyalithanda kangifuqwa yimali ukuba ngiqhubeke ngilidlale sekuwuthando.
“Into engigqugquzela kakhulu ngabantu, bayangimisa bangitshele ukuthi bayakukhumbula ukungibona ngenza engidume ngakho enkundleni.
“Lokho nje kukodwa kuyangikhuthaza yingakho kuyisifiso sami ukuthi ngisivale kahle isahluko sebhola lami. Iqiniso okungafanele ngilibalekele wukuthi ibhola lizophela ngeke ngilidlale unomphelo yingakho ngifisa ukuvala kahle akukhathalekile ukuthi ngidlala kuphi,” kusho uTshabalala.
Limbuza leli phephandaba ukuthi umangase kuthiwe akakhethe ukuthi iyiphi ikilabhu angafisa ukubeka amakhokho ethala edlala kuyo phakathi kweFree State Stars emveze ebholeni neKaizer Chiefs anqobe inqwaba yezinkomishi nayo uthe:
“Kunzima ukuthi ngikhethe ngoba womabili la makilabhu anendawo ekhethekile enhliziyweni yami.
“IFree State inginike ithuba lokudlala esigabeni esikhokhelayo, empeleni iyona engiphendlele indlela, ngaleyo ndlela iyohlezi isenhliziyweni yami.
“NeChiefs ngokunjalo ngihlale iminyaka kuyona nganqoba nayo inqwaba yezinkomishi.
“Kunzima ukukhetha ngoba womabili la makilabhu anendawo enhliziyweni yami,” kusho uTshabalala.
Limbuza ukuthi angasamukela yini isicelo sokudlalela ikilabhu egijima kwiGladAfrica Championship uthe: “Ngaphambi kokuba kuvalelwe i-coronavirus kunamakilabhu cishe angaphezulu kuka-10 aphesheya abengifuna kwase kuvela lesi sifo.
“Namanje akhona amakilabhu asangixhuma akhona phesheya ngoba kukhona ama-agent akhona okuyiwona engixoxa nawo.
“Uma kudlula yonke le nto ngizobona ukuthi kugcina kanjani.
“Akekho owaziyo ukuthi ikusasa lingambekaphi kodwa uma kukhona ikilabhu engithintayo kwiGladAfrica Championship, uma sivumelana ngakho konke, ngeke nginqabe.
“Kodwa kubalulekile ukuthi ngikusho ukuthi lokho akusho ukuthi ngizohamba ngiziphonsa. Ngizokuya lapho engibona khona ukuthi kuzwana nami uma kuyikwiGladAfrica.
“Kodwa-ke ngeke sazi asilinde sibone ukuthi kuzokwenzakalani uma kudlula le nto.
“Engikucelayo kubantu bakithi wukuthi bakuqinisekise ukuthi bayayilandela imiyalelo kahulumeni.
“Bese ngidlulisa ukubonga kwabezempilo ngomsebenzi omuhle abawenzayo yize besengozini.
“Ngibonge nabezomthetho ngokwenza isimo silawuleke kulobu bunzima.
“Ngiyacela ukuba abantu bangayeki ukugeza izandla baqhubeke nokuqhelelana ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane le-corona,” kuphetha uTshabalala.
Previous articlebakhala “ngesihluku” esibhedlela saseNkandla
Next articleUmndeni usola amaphoyisa ngokugwazelwa